हाकिम साब ! हाँसेरै काम हुँदैन भन्नुस् तर ठुस्स नपर्नुस् – Jaljala Online
हाकिम साब ! हाँसेरै काम हुँदैन भन्नुस् तर ठुस्स नपर्नुस्
यमुना अर्याल (काफ्ले) । सिंहदरबारभित्रको एउटा मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतको एक कार्यालय काम विशेषले एक जना साथीसँग केही समयअघि त्यहीँ कार्यालयमा जानुपर्ने भयो। साथी सिंहदरबारमा अपरिचित थिई, म त्यहाँ गइरहने भएकोले उसले काम गराउने कार्यालयसँग परिचित नै थिएँ।
हाकिम साबले बिहान ११ बजे आउनु भनेका रहेछन्, हामी निर्धारित समयमै पुग्यौं। हाकिम साबको नाम, पद सहितको विवरणले उनी कायाकक्षमै भएको जनाऊ दिइरहेको थियो।
सरासर हाकिम साबको कोठामा छिर्‍यौं। हाकिम साब कम्प्युटरमा केही काम गर्दै थिए, सेवाग्राहीको नाताले हाकिम साबलाई अभिवादन गर्यौं। मेरी साथी र मेरा दुवै हातले नमस्कार गरिरहे पनि हाकिम साब मौन बसे, उनले नमस्कार फर्काएनन्।
साथी र म खुट्टा फतक्क गलुन्जेल उभिइरहयौं, हाकिम साब आफ्नो काम गरेको गर्यै गरे, एकैछिनमा टिर्रटिर्र फोनको घण्टी बज्यो। फोन पनि निकै बेरसम्म कराइरह्यो उनले उठाएनन्।
उसले कर गरेपछि फेरि बोलें , सर …. फलानो अफिसको काम के भयो? आज ११ बजे बोलाउनु भाथ्यो त्यही भएर आएको। बल्ल हाकिम साबले कुर्सी घुमाए र अमूल्य वचन बोले – टाइम लाग्छ।
टाइम त लाग्छ तर कति लाग्छ? कतिबेला सकिन्छ? आज ११ बजे बोलाएर किन भएन? के कारणले विलम्ब भएको हो? त्यसको जवाफ सायद उनले दिन सक्दैनन्, उनको व्यवहारले पहिल्यै देखाइसकेको छ। फेरि एक पटक जे पर्लापर्ला भनेर तोलाको वचन खोलामै फाले, सर कति बेला हुन्छ त काम? हामीलाई फेरि अफिस पनि जानुछ …।
एक मनले त मुखैभरिको जवाफ दिएर जाऊँ जस्तो पनि लाग्यो, आफ्नो लिनु दिनु केही थिएन तर अर्को मनले सोचें, यही हाकिमसँग काम गराउनु छ, फेरि अनावश्यक लफडा गरिदिएँ भने के गर्ने? ढिलोमाथि झनै ढिलो गर्देलान् भन्ने पिर। टाढादेखि साथी आएकी छ …।
ती भाइको कार्यकक्ष कहाँ हो ? उनको नाम के हो थाहा छैन। ती भाइ भनिएका स्टाफ लुसुक्क निस्किएर हिँडे। कता गए कता कहाँ खोज्न जाने? एकजना दिदी आइन्, उनैलाई सोधें, ‘ए दिदी भर्खर निस्किएको सरको कोठा कुन हो ’?
ऊ यही हो अगाडिको कोठा देखाइन्। ती स्टाफ आउलान् र काम गराउँला भनेको एक घण्टासम्म पनि आएनन्। तिनै दिदीसँग बरु निकैबेर कुराकानी भयो।
ज्यालादारीमा कार्यरत रहिछन् दिदी। हाकिमसाबको स्वभावबारे पनि कुराकानी भयो।
तिनै हाकिम साबको कार्यकक्षमै स्टिकर टाँसिएको थियो, मुस्कान सहितको सेवा। त्यही नाराले गिज्याइरहेको थियो स्वयम् हाकिमसाबको चरित्रलाई।
आफूले देशकै प्रशासनिक केन्द्रमा यस्तो व्यवहार भोगेपछि यसो इन्टरनेटमा सार्वजनिक प्रशासन बारेमा खोजी गर्न थालें। काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्मचारीहरूको शिष्टाचार तथा आचारसंहिता २०६७ जारी गरेको रहेछ।
कामै नभए पनि मीठो बोल्दा, सेवाग्राहीले सोधेका कुराको जवाफ दिँदा हाकिम साबको पदीय मर्यादामा खलल त पुग्दैन्थ्यो होला तर अपशोच पदको दम्भ र आडम्बरले सितिमिति हाकिम साबहरू सहज रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैनन्। यो दीर्घकालीन रोग नै कर्मचारीतन्त्रको।
सेवाग्राहीले तिरेकै करले तपाईंको रोजीरोटी चलिरहेको जो छ उल्टै सेवाग्राहीलाई किन यत्ति वेवास्ता? गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन सिंहदरबारमै खास शासन चल्न सकेको छैन। सेतोपाटी अनलाइनबाट साभार
राप्ती राजमार्गमा देखियो यस्तो चमत्कार
Posted on November 5, 2019 Author Jaljala Online
कात्तिक १९, दाङ । दाङ-सल्यान-रुकुमलाई जोडने राप्ती राजमार्ग जीर्ण बन्दै गएको छ। यो खबर गोपाल शर्माले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेकेका छन् । दाङको अमिलियादेखि रुकुम मुसिकोटसम्मको मुख्य सडकको रुपमा रहेको राप्ती राजमार्ग नियमित मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको हो। चार वर्षदेखि उक्त सडक मर्मत समेत गरिएको छैन। सडक जीर्ण हुँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। तुलसीपुरदेखि […]